Ndị Uwe Ojii Awụchikọọla Ndị Otu Nzuzo n'Awka
Mgbe a na-akpụgharị ndị ahụ a na-enyo enyo, onyeisi ndị uwe ojii na steeti ahụ, bụ Maazị Garba Ụmar kwuru na nke a gosiri nnọọ na ndị ọrụ nchekwa na-agbasi mbọ ike iji me ka mpụ na aghụghọ bụrụ akụkọ mgbe ochie, ma sịkwa na ha ga aga n'ihu ime nke ahụ wee ruo mgbe aka kpaara ndị fọrọ afọ.
O kwuru na ufọdụ n'ime ndị ahụ nke gụnyere Chukwudị Machie, Chukwudị Igwebụeze, Onyeka Igbanugo, lfeanyị Anazọba na Chukwuemeka Nwokoye kwuru na ha bụ ndị otu "Black Axe" ma sokwa n'isi sekpụ ntị na nkwàtụ ahụ ndị otu nzuzo na-akwàtụ n'Awka. O mekwara ka a mara na ya na ndị ọrụ ya ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị omekome enweghịzị ebe nzuzo ọbụla.
N'ajụjụ ọnụ a gbara ha, ụfọdụ n'ime ndị ahụ a na-enyo enyo kwuru na ọ bụ onye otu nzuzo kemgbe ihe dị ka ahọ iri na asaa, ma na ya apụọla na ya kemgbe ahọ iri na otu gara aga n'ụlọ ụka ga, ma sị na e nwudere ya n'Awka oge ọ na-achọ ka o kpezie esemokwu dapụtara n'etiti onye ọkada na onye na-anya keke, bụ ndị e leghị anya ha abụrụ ndị otu nzuzo.
N'akụkụ nke ya, onye ọzọ n'ime ha, bụ Agafena Ọnyịa kwuru na ọ banyere otu nzuzo maka na o chere na ọ bụ ụzọ isi nwee ego, mana ihe bịazịrị dagharịa n'ụzọ a tụghị anya, ebe onye ọzọ bụ Chukwuka Ude, bụ onye e kwuru na a hụrụ egbe n'aka ya, kọwara na ọ maghị ihe ọbụla banyere ebubo ahụ a na-ebo ya.
Ihe e nwetara n'aka ndị ahụ gụnyere egbe AK 47 mgbọ dị n'ime ya, otu nsụnsụ egbe, ụdị egbe ndị ọzọ dị iche iche na ụgbọ ala Toyota.